एजेन्सी : सौन्दर्य ताको कुरा गर्दा चाइनिज युवतीहरु अरु देश हरु भन्दा भिन्न प्रकारका हुन्छन ! चाइनिज युवतीहरुको सुन्दरता को चर्चा बिस्वमै हुन्छ ! चाइनिज युवतीहरुले आफुहरुलाई सुन्दर बनाउन को लागि बिभिन्न उपाएहरु अपनाउने गरेका हुन्छन ! त्यो कारण ले पनि चाइनिज युवतीहरु आफ्नो अनुहार बेदाग , चम्किलो अनि नरम छाला को लागि बिस्वभर परिचित छन् ! घरेलु तथा पारम्परिक तरिका अपनाएरकै भरमा उनीहरु यति धेरै सुन्दर देखिएका हुन् ।सफा अनुहारको लागि चिनियाँ युवतीहरु पुदिना प्रयोग गर्छन्। पुदिनाको पात पिसेर अनुहारमा लगाएर सुकेपछि धुन सकिन्छ। अनुहारलाई चाउरीपनबाट बचाउन चिनियाँ युवतीहरु…
काठमाडौँ – हाँस्यटेलिसिरियल सक्किगोनी को टिम वि’रुद्ध मिडिया हबले प्रहरीमा उ’जुरी हालेको छ । नेपाली टेलिभिजन बाट प्रसारण हुँदै आइरहेको हास्य टेलिश्रृंखला ‘सक्किगोनी’को टिम वि’रुद्ध मिडियाहवले प्रहरीमा कपी राइटको उ’जुरी हालेको हो । हाँस्य टेलिसिरियल ‘भद्रगोल’ का क्यारेक्टरहरू नक्कल गरेको भन्दै मिडिया हबले कपि राइटको उ’जुरी हालेकाले आफूलाई त्यस विषयमा छलफल गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुबाट आफूलाई फोन आएको अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ले जानकारी दिए । मिडिया हवले भने जिग्री, पाँडे, बले कक्रोच, सितेबा जस्ता दर्जनौं, क्यारेक्टरहरु आफ्नो उत्पादक भएको भन्दै तीनिहरुमा आफ्नो हक लाग्ने बताएको छ । उ’जुरीमा कुनै क्षतिपूर्तिको…
काठमाडौँ । नेपाल बाट नयाँ दिल्लीको लागी छुटेको यात्रुबहाक बस लखनउमा दुर्घ’टना भएको छ । दुर्घ’टनामा परी दुई दर्जन भन्दा बढी यात्रु घा’इते भएका छन् । घा’इते हुनेमा धेरैजसो नेपाली नागरिक रहेको बताइएको छ । घा’इतेहरूलाई लोहिया अस्पताल भर्ना गरिएको र उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । आइतबार बिहान भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको राजधानी लखनउ स्थित इकाना स्टेडियम नजिकै ट्रकसँग ठोक्किएर उक्त बस दुर्घ’टना भएको हो ।सो बस नेपालको कुन स्थानबाट प्रस्थान गरेको हो भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन । नेपालगञ्ज प्रहरीका अनुसार बस दुर्घ’टनाबारे प्रारम्भिक जानकारी…
एजेन्सी। हरेक वर्ष विश्व सुन्दरी बन्नका लागी विभिन्न प्रतियोगिता चल्ने गर्दछ । विभिन्न प्रकृतिका सुन्दरीहरू विश्व सुन्दरी बन्नका लागी तपाडछमछाड गरिरहेका हुन्छन् । रूसमा ६ वर्षिया बालिका विश्व सुन्दरी घोषित भएकी छिन् । हेर्दा निकै सुन्दरी देखीने उनी ६ वर्षकी हुन् । ४ वर्षको उमेर बाट मोडलिङ शुरू गरेकी उनलाइ विश्वको सबैभन्दा सुन्दर बालिका भएको घोषित गरिएको छ । उनको नाम यलीना यकूपोवा हो । उनी अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै नै लोकप्रिय भइरहेकी छिन् । हेर्नुहोस् ती बालिकाको सुन्दर तस्वीरहरू
एजेन्सी । तपाई’ले गरे’को प्रग’ति स्वाह हुन कत्ति’बेर लाग्दै’न । तपाई’ले पर्स’मा पैसा’को साथै अरु के के सामान’हरु राख्ने गर्नु भएको छ ? केही यस्ता वस्तु’हरु पर्समा राख्दा अशुभ मानिन्छ । त्यस्ता अशु’भ सामान’का कारण हामी’लाई कंगाल समेत बनाइ’दिने गरेको छ । वास्तु’का अनु’सार पर्समा औषधी राख्दा पैसा निकै खर्च हुन्छ । अश्लिल चित्र र सामग्रीले भाग्यमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ जसले खल्तीको साथै घरको ढुकुटी पनि खाली हुन थाल्छ । बिल, रसिद, एटीएमको पर्चा आदि राख्नु वास्तुका अनुसार अशुभ मानिन्छ । ब्लेड, चक्कु र धारिलो वस्तु पर्समा राख्दै नराख्नुहोस् ।…
काठमाडौं । प्रकाश सपूतको अभिनयमा रहेको नयाँ तिहार गित सार्वजनिक गरेको छ । दिदि भाइको सुमधुर सम्बन्धलाइ अझ प्रगाढ बनाउने नेपालीहरूको पर्व तिहार नजिकिँदै गर्दा बरिस्ठ सर्जक रमेश बिजीको मनछुने मर्मस्पर्शी शब्द संयोजन र चर्चीत संगितकार बिबि अनुरागीको संगितमा बहुचर्चित सर्वप्रिय गायक राम कृष्ण ढकालको स्वरले सजिएको “टिका माला” बोलको तिहार गीत बजारमा आएको छ । चर्चित गायक तथा मोडल प्रकाश सपूत र सरिता लामिछानेको जीवन्त अभिनय रहेको यस गीतको भिडियोलाई निर्देशक शंकर बीसीले निर्देशन गरेका हुन् । सबै भन्दा धेरै म्युजिक भिडियो निर्देशन र अभिनय समेत गरिसकेका शंकर बिसी भन्छन्…
बलिउड अभिनेत्री सारा अली खानले बक्सिङ गरिरहेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेको छ । खानले आफ्नो इन्स्टाग्राममा नयाँ भिडियो पोष्ट गरेकी थिइन्, जहाँ उनी बोक्सिङको अभ्यास गरिरहेको छिन् । साराको यस भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल बनिरहेको छ । अभिनेत्री साराले शनिबार यस भिडियोलाई पोस्ट गरेकी हुन् ।साराको यस भिडियो हेरेर सबैले उनको तारिफ गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सारा अभिनेता रणवीर सिंहको फिल्म ‘सिम्बा’मा देखिएकी थिइन् । उनको दुई वटा फिल्महरु रिलिजको तयारीमा छन् । कुली नम्बर–१ मा उनी अभिनेता बरुण धवनको अपोजिटमा देखिदैछन् । यो फिल्म १ मे २०२०…
मिती २०७६ कात्तिक ०३ गतेको तपाइको भाग्य दिन राशिफल हेर्नुहोस्
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) – दाजुभाइ वा अग्रजहरूको सुझाव तथा सल्लाह मानेर अगाडि बढ्दा सफलता पाउँन सकिनेछ । विद्यामा राम्रो प्रगति हुँने हुँदा पढाई लेखाइमा मन जानेछ । बौद्धिकता प्रयोग गरी समाजमा राम्रा काम गरेर देखाउँन सकिनेछ भने आस मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ । बेलुकीपख लामो दुरीको यात्रा हुने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ भने विदेश सँग सम्बन्धित कामहरू हुनेछ । बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,बि,वू,वे,वा) – नयाँ काम पाउने तथा नोकरिमा उच्च पद प्राप्तिको गतिलो सम्भावना रहेको छ । लक्ष्य प्राप्तिको लागि चालिने पाइलाहरू सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्नेछन् । पढाई लेखाई अरूभन्दा एक कदम…